Adobe Premiere tsy nahy nanala rakitra 100.000 XNUMX ho an'ny mpamorona | Famoronana an-tserasera
Ary ity mpamorona endrika ity dia nitory an'i Adobe noho ny famafana rakitra 100.000 XNUMX noho ny tsy fahombiazana. Dave Cooper dia nitaky onitra noho ny didim-pitsarana iray ao amin'ny Adobe Premiere, ny programa fanovana horonantsary izay mitana ny laharana indrindra amin'ny asa.
100.000 XNUMX ny fisie eo anelanelan'ny horonan-tsary sy ny sary izay nahavita nitondra tany amin'ny fitsarana ilay orinasan-rindrambaiko famolavolana izay nanova ny mason'ny famoronana manerana an'izao tontolo izao. Alao an-tsaina fotsiny ny toe-javatra misy bibikely Premiere hamafa ireo rakitra maro ao amin'ny PC-nao ...
Ary raha ny fahitana azy Tsy i Cooper irery no voakasik'izany noho ity tsy fahombiazana matotra ity, satria maro ny hafa, ary izany dia mety hanatevin-daharana ny antony. Adobe dia efa nahafantatra sy nanamboatra ny olana tamin'ny fanavaozana. Hiresaka momba ny kinova 11.1.1 an'ny Adobe Creative Cloud 2017 fotsiny izahay.
Ny olana dia mitoetra ao amin'ny fitaovana Adobe Premiere tompon'andraikitra mazava cache mba hialana amin'ireo rakitra vonjimaika izay noforonin'ny programa amin'ny tetikasa rehetra atombotsika. Izy io dia ao amin'ny kinova 11.1.1 izay hamafana ny cache mihoatra noho ireo rakitra tsy maharitra fotsiny.
Izany dia ao anatin'ny fangatahana izay angonin'i Cooper izay tokony hisy namafa horonan-tsary sy sary maherin'ny 100.000 miaraka amin'ny tombany $ 250.000. Ary izany dia tsy manisa ny tombony mety ho azon'ireny horonan-tsary sy sary ireny atolotra amin'ny alàlan'ny fahazoan-dàlana.
Amin'izao fotoana izao Tsy fantatra izay hataon'i Adobe momba azy, satria mety hidika izany ny fiverenan'ny fahasimbana na ho an'ity mpamorona ity na ho an'ny hafa izay mety hanisy lesoka lehibe amin'ny famafana rakitra. Adobe izay nohavaozinao ny programa nataonao vao tsy ela akory izay ary manohy ny maha-mpanjakavavin'ny sehatry ny rindrambaiko famolavolana ireo karazana fitaovana rehetra.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Graphic Design » Noho ny bibikely, Adobe mamafa rakitra 100.000 ho an'ny mpamorona
Angela Beatriz Pezoa Opazo dia hoy izy:
Valiny tamin'i Angela Beatriz Pezoa Opazo
Louis Armando Leal dia hoy izy:
Lesona lehibe. Tsy maintsy manana kopia voafafa amin'ny kapila hafa isika, ivelan'ny kapila lehibe.
Valiny tamin'i Luis Armando Leal
"Puzzles Montage" mampino an'i Klein